Phupha ngesikhombisi Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Nakumaxesha angaphambi kobuKristu, abantu babeyila iindlela ngeendlela zokulinganisa ixesha. Ukuyilwa kweewotshi kuzise nendlela ethembekileyo yokulinganisa ixesha. Ixesha elibonisiweyo lalichanekile ngokufaka iwotshi kwindawo yokufowuna ngesandla esikhulu seeyure kunye nesandla esincinci semizuzu kwaye sele isetyenzisiwe kangangeenkulungwane ukuza kuthi ga ngoku.
Ukusukela kwinkulungwane yama-XNUMX, iiwotshi zedijithali ziye zaxhaphaka, ngakumbi iiwotshi zealam. Udonga lwakudala kunye newotshi yesihlahla zinezikhombisi kunye neenombolo.
Ukuba umntu uphupha ngesikhombisi, iphupha elo lingathatha ixesha elithile. Mhlawumbi unesithembiso esibalulekileyo ngentsasa elandelayo kwaye woyika ukusiphosa. Iinkcukacha zithatha isigqibo sokucaciswa kwamaphupha: ingaba izandla zimile, iwotshi mhlawumbi iyakhawuleza okanye iyacotha?
1 Isimboli yephupha «isikhombisi» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Isimboli yephupha «isikhombisi» - ukutolika kwengqondo
3 Isimboli yephupha «isikhombisi» - ukutolika kokomoya
Isimboli yephupha «isikhombisi» - ukutolikwa ngokubanzi
Uphawu "lwesikhombisi" sephupha lubonisa ukuba into iza kuphela, kodwa ikwisiqalo sento entsha. Ukutolikwa kwamaphupha, kubandakanya ukudlula kunye nophuhliso oluthe kratya. Iphupha licela ixesha kunye nokufumaneka mathuba sebenzisa.
Kuxhomekeka kwimeko yobomi bobuqu kunye nobuntu bephupha, isikhombisi sewotshi ekutolikeni kwephupha kunokuba ngumqondiso Ukugqithisa ukuba. Ngokunokwenzeka umphuphi woyika ukungakwazi ukuzalisekisa okulindelweyo kubekwe kuye ngexesha elifunekayo.
Isimboli yephupha nayo ingaphambili Ukungangqinelani lumkisa kwaye ucele ukuthatha isigqibo. Ngokukodwa xa izikhombisi zivela ezintlanu ukuya kwishumi elinambini, ubuthongo kufuneka buqalele ngaphakathi.
Isiganeko esichanekileyo sephupha sibalulekile ekuchazeni iphupha. Ukuba isikhombisi sihamba ngokukhawuleza ephupheni, uphawu lwephupha lubonisa ngokubanzi. ukungoneliseki phantsi. Abaphuphi bacinga ukuba ubomi bakhe abuhambi ngendlela enqwenelekayo kwaye ixesha lihamba lingasetyenziswanga.
Ukuba izandla zewotshi ziyekile, oku kubonisa ukuphela kwesigaba okanye imeko kutoliko lokulala. Ngaphantsi kweemeko, iphupha eli liphawula esi sigqibo singalindelekanga ngokoyika.
Ukuba ujikeleza iwotshi ephupheni kwaye ngokwenza oko izandla zisebenza kwakhona, oku kuthetha ukuba, ngokokutolikwa kwephupha elo, liphupha elitsha. Inqanaba lobomi kuqala. Ukuba izandla zisethwe ngokutsha, uphawu lokulala lukuxelela ukuba ungabeki into ebalulekileyo kwisitovu esingasemva. Ukuba ziyenzeka, iphupha kufuneka libe nomonde okwethutyana ngaphambi kokuba umnqweno uzaliseke.
Isimboli yephupha «isikhombisi» - ukutolika kwengqondo
Kwimeko yezengqondo, isalathi sephupha "isalathi" luphawu lwe Ukungakwazi ukwenza izigqibo yokuphupha. Kunzima kuwe ukuba uthathe isigqibo kwaye ugqibe kwisigqibo.
Ukutolikwa kwamaphupha, izandla zewotshi zilumkisa ngaphezu kwako konke oko ukungxamiseka imicimbi ethile. I-subconscious ilumkisa umphuphi ukuba aqonde imisebenzi yakhe. Ukuhlangabezana nezi zinto kufuna ukuba singabekekisi bucala izigqibo ezibalulekileyo.
Ngapha koko, "isikhombisi" isimboli yamaphupha kutoliko lwengqondo lwephupha kunokubonisa uloyiko lokungazi. ukudlula Iingoma. Ephupheni, amava ephupha aphela ngokukhawuleza kobomi. Ukongeza, kunokubakho ukuzifihla okuzifihlayo, ungasebenzisi amathuba kwaye uphulukane nobomi bokwenyani.
Ngophawu "lwesikhombisi" sephupha, i-subconscious nayo inokubonisa ukuphela kwenqanaba lobomi. Ukuba izikhombisi ziyekile ephupheni, iphupha linokuba sisicelo esivela kwi-subconscious ukuba uthathe ikhefu kwaye uphinde uzivuselele ngokwengqondo.
Isimboli yephupha «isikhombisi» - ukutolika kokomoya
Ukuqhubela phambili kwezandla zewotshi kufanekisela ukukhula kwengqondo ngephupha ekuchazeni amaphupha okomoya. Uphawu lwephupha lubonisa eyakho Inqanaba lolwazi kunye nolwazi lwakhe lokomoya ubudala kunye nexesha.